Ahoana ny fomba hanaovana ny effets watercolor amin'ny Photoshop | Famoronana an-tserasera
Photoshop dia fitaovana tsara hanovana ny sarinao ary hanome azy ireo fikitihana kanto. Amin'ity lahatsoratra ity Hampianatra anao tsikelikely ny fomba fanaovana ny watercolor effets ao amin'ny Photoshop aho. Tsotra be izy io ary, na dia miasa tsara indrindra amin'ny saripika aza izy io dia azonao ampiharina amin'ny karazana sary rehetra mba hanomezana azy fomba tena mamorona Andramo izany!
1 Mamorona canvas ao amin'ny Photoshop
2 Omano ny sarinao hamadika azy ho lasa loko rano
3 Apetaho amin'ny sivana 1 ny sivana zavakanto
4 Mamorona sosona fanitsiana vaovao roa ary ampio amin'ny sosona 1
5 Mamorona sarontava vaovao amin'ny sosona 1 ary manaova sary
6 Lokoy ny Photoshop ny loko mandoko anao
Mamorona canvas ao amin'ny Photoshop
Andao hanomboka amin'ny famoronana ny lamba izay hanahafantsika ny loko misy ny rano. Tsindrio ny "File> vaovao" na amin'ny efijery an-trano dia kitiho ny bokotra "mamorona vaovao". Hisafidy ny antontan-taratasy 1000 x 1000 pixel izahay, ny maody miloko RGB.
Raha vantany vao azonao io dia mandehana any amin'ny "sivana" vakizoro, eo amin'ny menio ambony, ary kitiho eo "Galerie sivana". Hisokatra ny varavarankely vaovao izay ahitanao ireo sivana samihafa voalamina ao anaty lahatahiry. Mandehana any amin'ny fampirimana "firafitra" ary fidio ny "firafitra". Ao amin'ny tontonana ankavanana, hamboarintsika:
Scale hatramin'ny 64%
Hazavana ambany ankavanana
Rehefa manana ianao dia tsindrio "ok" ary ho vonona ny lamba lamba.
Omano ny sarinao hamadika azy ho lasa loko rano
Sokafy ny sary tianao hivadika ho rakitra misaraka. Handeha isika esory ny fototra. Ampiasao ny mifidy fitaovana sujet hifantina ilay zazavavy. Rehefa manana ianao, mamorona sarontava sosona amin'ny alàlan'ny fanindriana ny marika voalaza eo amin'ny sary etsy ambony.
Raha tsy tonga lafatra ny fifantenana dia aza manahy, miaraka amin'ny vokatry ny watercolor dia tsy ho tsikaritra loatra. Na dia tianao aza, miaraka amin'ny borosy mainty sy fotsy, azonao atao ny mandoko ny saron-tava mba hamahana ireo lesoka ireo. Apetaho ny sarontava. Rehefa manana izany ianao tariho ny zazavavy mankamin'ny antontan-taratasy eo amin'ny lamba. Soraty ny baiko + T (Mac) na ctrl + T (Windows), mba hamindrana azy io sy handrefesana azy, amin'izay hataonao mampifanaraka azy amin'ilay toerana namboarinay.
Apetaho amin'ny sivana 1 ny sivana zavakanto
Ao amin'ny layer 1 dia hametraka sivana isika. Mandehana any amin'ny kiheba "Sivana"> "galeri-sivana", ao amin'ny varavarankely vaovao, sokafy ny lahatahiry "artistic" ary kitiho ny "dilude color". Manaraka, eo amin'ny tontonana eo ankavanana, hamboarintsika:
Andininy borosy 14
Hamafin'ny aloka 0
Rehefa manana izany ianao namely "ok".
Mamorona sosona fanitsiana vaovao roa ary ampio amin'ny sosona 1
Handeha isika mamorona sosona fanitsiana vaovaoMba hamoronana sosona fanitsiana dia mila tsindrio ilay sary voalaza etsy ambony amin'ny sary etsy ambony. Raha izany dia, tsindrio ny hue / saturation. Mba hampiharana ny fikirana amin'ny takelaka etsy ambany ihany, Layer 1, karazana baiko + safidy + G (Mac) na fifehezana + alt + G (Windows). Arotsaho izao ny mahavoky - 100. Mamorona a sosona fanitsiana vaovao, amin'ity indray mitoraka ity ho an'ny "famirapiratana / fifanoherana" ary apetaho fotsiny amin'ny sosona 1. Atsangano ny fiposahan'ny mazava hatramin'ny farany avo indrindra.
Mamorona sarontava vaovao amin'ny sosona 1 ary manaova sary
Rehefa tonga amin'ity teboka ity ianao dia ho vonona ny zavatra rehetra hanomboka hamorona ny watercolor anao. Mamorona a saron-tava vaovao ho an'ny sosona 1 ary, miaraka amin'ny borosy mainty, handoko azy ianao, fa tsy hampiasa karazana borosy fotsiny ianao!
Mandehana amin'ny varavarankely, borosy. Hisokatra ny tontonana vaovao. Eo ambanin'ny sehatra borosy dia hahita borosy vita amin'ny kanto marobe ianao Azonao atao ny manamboatra azy ary afaka manampy anao haka tahaka ny dian-doko sy ny tasy. Milalaova amin'ny habe, opacity, endrika, ary toerana ho an'ny karazany maro kokoa.
Lokoy ny Photoshop ny loko mandoko anao
Rehefa mihamalemy ny sarinao miaraka amin'ny mainty, miaraka amin'ny somary manjavozavo ny sisiny ary misy karazana "kapoka" hafa miseho na kely kokoa. Asio loko. Mampiasà borosy mitovy sy teknika mitovy amin'izany, amin'ity indray mitoraka ity ihany fa tsy mainty dia mampiasa loko ianao fa tsy mandoko amin'ny sarontava saron-doko dia hosodoko amin'ny sosona vaovao izay hoforoninay sy apetraka eo amboniny.
Mba hamoronana ilay sosona, kitiho ny marika voalaza eo amin'ny sary etsy ambony. Azonao atao ny misafidy paleta miloko tadiavinao amin'ity vokatra ity, mamporisika anao aho hanandrana loko pastel. Toa tsara izany!
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Famoronana an-tserasera » Fitaovana famolavolana » Ahoana ny fomba hanaovana ny effets watercolor amin'ny Photoshop